Dutchtown Dividend၊ အတွဲ ၁ • DutchtownSTL.org • Dutchtown၊ St. Louis, MO
မင်္ဂလာပါ Dutchtown စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်း။
ကျွန်တော်က Dutchtown Main Streets ဥက္ကဌ Nate Lindsey ပါ။ ငါမင်းတို့နှစ်ယောက်ကို နှစ်အတော်ကြာအောင် သိလာပေမယ့် ငါ့ကိုယ်ငါ (အထူးသဖြင့် ငါမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်) တရားဝင်မိတ်ဆက်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ငါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို ပေးဆောင်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ Dutchtown ပင်မလမ်းများ. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းငယ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော Dutchtown Dividend ၏ ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုမှတစ်ဆင့် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အထူးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။
ငါ စိန့်လူးဝစ်မှာ အစားထိုး ကုသမှု ခံယူနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်ဖြစ်သော Lawrence၊ Kansas ရှိ University of Kansas ဥပဒေကျောင်းမှ ဘွဲ့ရပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် တွဲဖက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သည်။ Rasmussen Dickey MooreKansas City ရုံးခွဲပြီး နှစ်နှစ်အကြာတွင် ရုံးခန်းအသစ်ဖွင့်ရန် စိန့်လူးဝစ်သို့ ဦးတည်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ စိန့်လူးဝစ်မြို့နှင့် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ မက်ဒီဆင်ကောင်တီတို့ အပါအဝင် ဒေသရှိ တရားစီရင်ရေး ဟော့စပေါ့များတွင် ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထတွင် ၎င်းတို့အား တရားစွဲခံရသည့်အခါ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဥပဒေအကြံဉာဏ်များ လိုအပ်သည့်အခါတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ကိုယ်စားပြုခြင်းပါဝင်သည်။
Kansas City ဧရိယာရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုအားလုံးမှ ဝေးကွာပြီးနောက် မကြာမီတွင် ကျွန်တော့်ဇနီး Staci Harvatin နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မြို့လယ်ခေါင်တွင် နေထိုင်ပြီး Staci သည် စိန့်မေရီ အထက်တန်းကျောင်းအနီး ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင် အိမ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဇာတ်လမ်းရှည်ကို အတိုချုံးပြောရရင် Staci နဲ့ ကျွန်တော် ချစ်မိသွားခဲ့ပြီး Dutchtown ရပ်ကွက်မှာ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ အဲဒါက ငါတို့ဘုရားကျောင်းကတစ်ဆင့် Padua ၏စိန့်အန်တိုနီယိုသို့သော် မကြာမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Downtown Dutchtown၊ စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့၊ ထို့နောက် ထိုဒေသရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် အိမ်နီးချင်းအများအပြားနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာမှာ တည်ဆောက်သူများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် ပြည့်နေသော အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dutchtown ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများရှိနေသော်လည်း Dutchtown တွင်နေထိုင်သူများသည်အမြဲတမ်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရှာဖွေနေပြီးရုန်းကန်နေရသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုကို ဤနေရာတွင် ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုရသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်—ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများသည် ၎င်းတို့၏ကြင်နာမှုနှင့် အချင်းချင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွင် ထူးထူးခြားခြား မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒတ်ခ်ျတောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဆောက်လုပ်ရေးသမားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို တည်ဆောက်လိုသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ Staci နှင့် ကျွန်ုပ်သည် Meramec နှင့် Louisiana ထောင့်တွင် လစ်လပ်နေသောအိမ်တစ်လုံးကို ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြင့် အနီးနားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးရေရှည်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ မဆိုင်းမတွဘဲ၊ ငါတို့က အဲဒါကို ငါတို့ရဲ့ “ထာဝရအိမ်” လို့ခေါ်တယ်။ လာမည့်နှစ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်နှစ်ဦးလုံးကို ဒတ်ချ်တောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သားနှစ်ယောက်ဖြစ်သော Thaddeus နှင့် Francis တို့ကိုလည်း ကြိုဆိုခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်သည် ယခင်က Downtown Dutchtown Business Association (501(c)(3)) ကို ကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင် စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။ Dutchtown CIDနှင့်ယခုအဖြစ်လူသိများသည်။ Dutchtown ပင်မလမ်းများ) ကျွန်ုပ်သည် လက်ရှိတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးတက်ကြွမှုကော်မတီ၏ ပူးတွဲဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ Dutchtown Economic Vitality Committee သည် Dutchtown ၏ လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအခြေခံကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များဖြင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကွဲပြားစေခြင်းတို့ကိုလည်း အာရုံစိုက်ထားပါသည်။
အဲဒါကို စိတ်ထဲထားပြီး၊ စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ Dutchtown Dividend ကို ဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Dutchtown Dividend သည် Economic Vitality Committee မှ သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်သော ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ နှစ်ပိုင်းဖြစ်သည်- (၁) Dutchtown Main Streets တွင် လုပ်ဆောင်နေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးစားစီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းကို အသိပေးရန်နှင့် (၂) ရရှိနိုင်သော အသေးစားစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းငယ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များပေးရန်။ အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေနှင့်၊ သင်အားလုံးသည် Dutchtown နှင့် Dutchtown Main Streets ရှိ စတော့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့အချိန်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေအတူတကွတိုးတက်နေတဲ့ Dutchtown ရဲ့အနာဂတ်မှာ ငါတို့မျှဝေရတဲ့မျှော်လင့်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သမ္မတ၊ ဒတ်ခ်ျတောင်း ပင်မလမ်းများ
Dutchtown ပင်မလမ်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်
Dutchtown ပင်မလမ်းများ 2022 တွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ဘက်စုံလုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ အသေးစိတ် အစီအစဉ် အပြည့်အစုံကို တွင် သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒီ linkဒါပေမယ့် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ နောက်လာမည့် ပရောဂျက်အချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါသည်။ Dutchtown Main Streets ကော်မတီများ 2022 ၏ပထမသုံးလပတ်နှင့်အထက်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
မြှင့်တင်ရေး ကော်မတီတို့နဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း နောက်တစ်ခု ဒတ်ခ်ျသွားပါ! ပထမအကြိမ် အိမ်၀ယ်သူများကို မျက်စိကျသည့် အိမ်ခြံမြေ အခွင့်အလမ်းများကို ပူးတွဲမြှင့်တင်မည့် ပွဲဖြစ်သည်။ Dutchtown သည် ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုဖြင့် မိသားစုများအတွက် စတင်နေထိုင်သူများအတွက် မယုံနိုင်လောက်စရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Dutchtown တွင် ပိုင်ဆိုင်လိုသော ငှားရမ်းသူများအား ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ထို့အပြင်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကော်မတီသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသော အလွန်အောင်မြင်သော လမ်းဘေးစင်္ကြံရောင်းချမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းငယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်လည်း စိတ်ပါဝင်စားပါသည်။ သင့်လက်လီရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ပွဲအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကော်မတီထံမှ ဂရပ်ဖစ်၊ ကြော်ငြာ သို့မဟုတ် အခြားအကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန် promotion@dutchtownstl.org.
ဒီဇိုင်းကော်မတီသည် သေးငယ်သောမျက်နှာစာ ထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်ကို စတင်နေပါသည်။ သန့်ရှင်းသော လမ်းမများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Dutchtown CID, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု, ပြီးနောက် ရပ်ကွက်အလှပြုပြင်ရေးအဖွဲ့. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသတွင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်စိတ်ဝင်စားသော သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ design@dutchtownstl.org.
ထပ်ဆင့်ကြည့်လျှင်၊ Dutchtown Main Streets သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂုဏ်ယူမှုနှင့် သတိပြုမိမှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ယခုနှစ်တွင် ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာများသို့ ရောက်ရှိလာသူများကို လမ်းညွှန်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအိမ်နီးနားချင်းများအတွက် စီးပွားရေးတက်ကြွမှုကော်မတီသည် Dutchtown Dividend သုံးလတစ်ကြိမ် အပ်ဒိတ်အတွက် ယခုတရားစွဲဆိုထားသည် — သင်ယခုဖတ်နေပါသည်။ ကော်မတီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအမြစ်များကို ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Dutchtown စီးပွားရေး ပိုင်ရှင်များ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှာလည်း ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်ရှိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လစ်လပ်နေရာအချို့ကို မြေပုံဆွဲခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ရန် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု.
ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Economic Vitality နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ နွေဦးရာသီတွင် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ပြပွဲတစ်ခု၌။ ကော်မတီသည် စီစဉ်ထားသော "Ask Me Anything" စတိုင်အတိုင်ပင်ခံအတွက် ငွေကြေး၊ တရား၀င်နှင့် အသေးစားစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ယူဆောင်လာသည့် Business Roundtable ပွဲကိုလည်း စီစဉ်နေပါသည်။ သင့်တွင် အတိုင်ပင်ခံများအတွက် အကြံဉာဏ်များ သို့မဟုတ် ဤပွဲကို အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ရန် အကြံဉာဏ်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ev@dutchtownstl.org.
နောက်ဆုံးတွင်၊ မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ၏အကူအညီဖြင့် အဖွဲ့အစည်းကော်မတီသည် 2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown Main Streets ပြီးမြောက်ခဲ့သောနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်နေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းကော်မတီသည် 2022 ခုနှစ်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်များခေါ်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ ပွဲများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်လိုပါက သို့မဟုတ် tabling for Dutchtown Main Streets သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ organization@dutchtownstl.org.
လာမည့် Dutchtown ပွဲများ
ဤသည်မှာ ဒတ်ချ်တောင်းတွင် မကြာမီဖြစ်ပျက်နေသည့်အချက်အချို့ဖြစ်သည်။ သင်သည် Dutchtown Main Streets နှင့် ပတ်သက်လိုသည်ဖြစ်စေ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခုကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်စရာများစွာရှိသည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှု Dutchtown ပြက္ခဒိန် တက်လာသမျှကို ကြည့်ဖို့။
မတ်လ ၁၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ • လူသားများအတွက် Habitat, 3830 တောင်ပိုင်းက Grand
အကယ်၍ သင်သည် Dutchtown အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို ရှာဖွေပါ။ ဒတ်ခ်ျသွားပါ အိမ်ရာကိစ္စ. ပထမအကြိမ်အိမ်ဝယ်သူများ၊ ဝင်ငွေနည်းသောနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသော ဝယ်သူများ၊ ငှားရမ်းသူများနှင့် Dutchtown တွင် အမြစ်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စူးစမ်းလိုသောသူများအတွက် အရင်းအမြစ်များ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပါမည်။
စနေနေ့၊ ဧပြီလ 21 ရက်၊ Virginia and Liberty ရှိ VAL Garden တွင် တစ်နေကုန်
နွေဦးရာသီကို ဆင်နွှဲပါ။ ရပ်ကွက်အနှံ့ ပိတ်ဆို့ပါတီ! မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် အသားကင်၊ အဖျော်ယမကာ နှင့် ပျော်ရွှင်စရာများ ထွက်လာရန် လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် ကော်မတီအစည်းအဝေးများအားလုံးကို အတုအယောင်ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ထားသည်။ လူကိုယ်တိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာမည်ကို သိရှိနိုင်ရန် DutchtownSTL လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ဒုတိယ အင်္ဂါနေ့တိုင်း ညနေ ၆ နာရီ (မတ်လ ၈ ရက်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်၊ မေလ ၁၀ ရက်)၊
Microsoft Teams မှတဆင့် အွန်လိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ပါ။ dutchtownstl.org/evmeeting
ကော်မတီထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ev@dutchtownstl.org
ဒုတိယ ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ညနေ ၆ နာရီ (မတ်လ ၁၀ ရက်၊ ဧပြီလ ၁၄ ရက်၊ မေလ ၁၂ ရက်)၊
Microsoft Teams မှတဆင့် အွန်လိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ပါ။ dutchtownstl.org/promomeeting
ကော်မတီထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ promotion@dutchtownstl.org
တတိယမြောက် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ညနေ ၆ နာရီ (မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက်၊ မေလ ၁၇ ရက်)၊
Microsoft Teams မှတဆင့် အွန်လိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ပါ။ dutchtownstl.org/orgmeeting
ကော်မတီထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ organization@dutchtownstl.org
တတိယမြောက် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ညနေ ၆ နာရီ (မတ်လ ၁၇ ရက်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်၊ မေလ ၁၉ ရက်)၊
Microsoft Teams မှတဆင့် အွန်လိုင်းတွင် ဆက်သွယ်ပါ။ dutchtownstl.org/designmeeting
ကော်မတီထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ design@dutchtownstl.org
Dutchtown တွင် စနေနေ့တိုင်း
စနေနေ့တိုင်း အသေးစားပွဲတော်တစ်ခုအတွက် Dutchtown မြို့လယ်သို့ သွားရောက်ပါ။ Downtown Dutchtown ၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆိုင်များကို စျေးဝယ်ပြီး Urban Eats Neighborhood Food Hall တွင် ထူးခြားသောစားသောက်ဆိုင်များမှ အဆာပြေစားနေစဉ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။ ကုန်သည်များသည် ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြမှုများ၊ နမူနာများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်သည်။
Spring Sidewalk အရောင်း
သောကြာ၊ မတ်လ ၂၅ ရက်နှင့် စနေနေ့၊ မတ်လ ၂၆ ရက် ဒတ်ခ်ျတောင်းမြို့လယ်
ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် Spring Sidewalk Sale အတွက် Meramec Street မှ ကုန်သည်များနှင့် ပူးပေါင်းပါ။ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် အထူးလျှော့စျေးများအပြင်၊ မဲနှိုက်ခြင်းနှင့် ဆုလက်ဆောင်များ၊ ရပ်ရွာအရင်းအမြစ်များ၊ ကလေးများ၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အခြားအရာများလည်း ရှိပါမည်။ Downtown Dutchtown တွင် သောကြာနှင့် စနေနေ့တွင် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဈေးဝယ်ပါ။
အခြားသော ထင်ရှားသော ပွဲများ
စနေနေ့၊ ဧပြီလ 14 ရက်၊ နံနက် 10 နာရီမှ2နာရီအထိ • Thomas Dunn သင်ယူရေးစင်တာ
လက်ပ်တော့ နောက်ကျနေလား။ တက်ဘလက်ပြဿနာ? ဖုန်းက fritz လား? လာပါ အခမဲ့အရင်းအမြစ်peer-to-peer IT ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် 's Tech Support Café။ သင့်စက်ပစ္စည်းများကို လည်ပတ်နေစေခြင်း၊ ပြဿနာများဖြေရှင်းနည်းကို လေ့လာပါ၊ သင့်ဂက်ဂျက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေပါ။ ဒီမှာပိုထွက်ရှာမည်.
အဆိုပါ Dutchtown နွေရာသီ Vibes လမ်းဘေးပွဲတော်သည် စနေနေ့၊ ဇွန်လ4ရက်နေ့တွင် Downtown Dutchtown သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဂီတ၊ အစားအသောက်နှင့် သောက်စရာများနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်လုပ်ငန်းသည် အဆိုပါပွဲကို စပွန်ဆာပေးလိုပါက သို့မဟုတ် ပါဝင်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အသိပေးပါ။ promotion@dutchtownstl.org.
Dutchtown ရုပ်ရှင်ည ယခုနွေရာသီတွင်လည်း Marquette Park သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးကူညီမှု အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ တဖန်ဆက်သွယ်ပါ။ promotion@dutchtownstl.org ပိုပြီးထွက်ရှာရန်။
Dutchtown Main Streets ပစ်မှတ်ဧရိယာ
နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု နှင့် စိန့်လူးဝစ်ပင်မလမ်းများပဏာမခြေလှမ်းDutchtown Main Streets သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ရည်မှန်းထားသောခရိုင်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤပစ်မှတ်နေရာကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်စုံလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အားသာချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး ရလဒ်များကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ပစ်မှတ်ဧရိယာသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လှုပ်ရှားမှု၊ နေထိုင်မှုနှင့် လစ်လပ်မှု၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် အခြားသော့ချက်ညွှန်းကိန်းများဆိုင်ရာ ဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက် အခြေခံအချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။ ထိုဒေတာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးပါမည်။
ပစ်မှတ်ဧရိယာသည် Dutchtown—Meramec Street၊ Virginia Avenue နှင့် South Grand Boulevard—နှင့် Meramec နှင့် Virginia လမ်းဆုံတဝိုက်တွင် ဗဟိုပြုသော သမိုင်းဝင်စီးပွားရေးခရိုင် Downtown Dutchtown ပတ်ဝန်းကျင်ကို အာရုံစိုက်ထားသည်။
သို့သော် သင့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် နေအိမ်သည် သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ်ဧရိယာတွင် မတည်ရှိသော်လည်း Dutchtown Main Streets သည် သင့်အား ကူညီရန် ဤနေရာတွင် ရှိနေကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ သင်သည် Downtown Dutchtown ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ကြာရှည်သောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်၊ Chippewa တွင်စတင်လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် Greater Dutchtown တစ်ဝှမ်းရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုစိတ်ဝင်စားသူနေထိုင်သူဖြစ်စေ၊ တိုးတက်သောရပ်ကွက်နှင့်မျှဝေကြွယ်ဝသောရပ်ကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် သင်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။ အားလုံးအတွက်။ ကြှနျုပျတို့ယုံကွညျသညျ Dutchtown ရှိ လမ်းတိုင်းသည် Main Street ဖြစ်သည်။.
Harris-Stowe နှင့် PNC အဖွဲ့သည် Black Entrepreneurship ကို မြှင့်တင်ရန်
Harris က -Stowe ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၄၅၀,၀၀၀ ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ PNC ဖောင်ဒေးရှင်း E ကိုတည်ထောင်ရန်3 စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လူမည်းပိုင် လုပ်ငန်းများတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် မညီမျှမှုများကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည့် PNC မှ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ကို Harris-Stowe's တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ လူနည်းစု စွန့်ဦးတီထွင်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြှင့်တင်ရေးစင်တာ (MECCA) သည် တက္ကသိုလ်၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှုစင်တာအသစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ထိုအဆိုအရ STL 2030 အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်ဤစီးပွားရေးကွာဟချက်များအား ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် စိန့်လူးဝစ်စီးပွားရေးအပေါ် ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ Black St. Louisans သည် လူဖြူနေထိုင်သူများနှင့် တူညီသောနှုန်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထူထောင်ပါက၊ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းသစ် ၈၀၀၀ နှင့် အလုပ်အကိုင် ၆၆၀၀၀ ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အမေရိကတစ်ဝှမ်းတွင် အကျိုးတူရန်ပုံငွေ၏ 2.4% သည် လူမည်း သို့မဟုတ် လက်တင်နိုလူမျိုးများက တည်ထောင်ထားသော startups များဆီသို့သာ သွားခဲ့သည်။ "ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် စိန့်လူးဝစ်၏ စတင်တည်ထောင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း အခွင့်အလမ်းများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို မွေးမြူရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်" ဟု စိန့်လူးဝစ်၏ PNC ဒေသဆိုင်ရာဥက္ကဋ္ဌ မိုက်ကယ်စကူလီက ပြောကြားခဲ့သည်။
E မှပေးဆောင်ရမည့်ဝန်ဆောင်မှုများ3 PNC မှ ပံ့ပိုးပေးသည်-
စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
လူနည်းစု စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုင်ရာ ပွဲများ
လူနည်းစု အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် ငွေကြေးပညာရေး
"HSSU သည် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အနာဂတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး၊ ဤအစပြုမှုသည် ဤအရေးကြီးသောမစ်ရှင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးလိမ့်မည်" ဟု ဌာနမှူး ဒေါက်တာ Stacy Hollins မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Harris-Stowe ရှိ Anheuser-Busch စီးပွားရေးကျောင်း.
PNC Bank မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ $88 ဘီလီယံ လူထုအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်. အစီအစဥ်အတွင်း လူမည်းများ၊ ဝင်ငွေနည်းသော နှင့် အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အစပျိုးမှုများကို တိုးမြှင့်ရန် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ကတိပြုထားသည်။
လူမည်းအများစု၊ ဝင်ငွေနည်းသောရပ်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့် E ၏ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။3 PNC ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသော Dutchtown သို့ ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ Dutchtown ပင်မလမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ပန်းတိုင်ကို မျှဝေထားပြီး Dutchtown တွင် ဆိုင်ဖွင့်ရန်အခွင့်အရေးများရှာဖွေရန် အဆင်သင့်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ပြီး သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကို မြှင့်တင်ဖို့ PNC နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် အလုပ်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တောင်ဂရန်းဌာနခွဲ.
Harris-Stowe ဓာတ်ပုံ ရှင်ပေါလု Sableman.
ဒိန်းမတ် Dutchtown Dividend Dutchtown Dividend၊ အတွဲ ၁